Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်များ - တရားဝင် Wallet များကို GNU / Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။ | Linux မှ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းသောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ (အပလီကေးရှင်း) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလောကသို့ပြန်လည် ၀ င်ရောက်မည် Cryptocurrencies နှင့် DeFi။ အထူးသကျနော်တို့သို့ delve ပါလိမ့်မယ် GNU / Linux တွင်တရားဝင် Dogecoin Wallets ကိုမည်သို့တပ်ဆင်သနည်း။
ထိုကဲ့သို့သောနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံအတည်ပြုနိုင်သည်၊ အလွန်အသုံးဝင်ပါကဆက်လက်ပြသရန်ဖြစ်သည် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များအထူးသဖြင့်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့အား GNU / Linux များသူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုတူးဖော်ရေး / သိုလှောင်ဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ ကဲ့သို့သောတည်ဆဲ Bitcoin၊ Dogecoinအခြားသူများအကြား။
ထို့အပြင်ကိုင်တွယ်ရမည့်ခေါင်းစဉ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်၎င်းကိုအပြည့်အဝမဝင်ခင်၊ ဒီထုတ်ဝေမှုကိုဖတ်ရှုခြင်းရဲ့အဆုံးမှာအကယ်၍ ခေါင်းစဉ်သည်ဤနယ်မြေတွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါက၊ အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပါ ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ ဒါကကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်လိမ့်မည်။
ကတည်းကသူတို့၌သူတို့တွေ့လိမ့်မည် ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အများကြီး on:
မည်သည့် Operating Systems နှင့် Application များသည်တည်ရှိပြီးဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
ကွဲပြားခြားနားသော Cryptoassets များကိုသတ္တုတွင်း / သိုလှောင်ရန် GNU / Linux Distros များကိုမည်သို့ပိုကောင်းအောင် / လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နည်း။
1 Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်: တရားဝင်ပိုက်ဆံအိတ်
1.1 GNU / Linux တွင်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သို့ Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်များထည့်သွင်းထားသနည်း။
1.1.1 Dogecoin ဆိုတာဘာလဲ
1.1.2 Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ် - MultiDoge နှင့် Dogecoin Core
1.2 Cryptocurrencies နှင့် DeFi အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်: တရားဝင်ပိုက်ဆံအိတ်
GNU / Linux တွင်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သို့ Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်များထည့်သွင်းထားသနည်း။
ဖော်ပြခြင်းမပြုမီ သူတို့ကဘာတွေလဲ၊, အမျိုးမျိုးသောကြောင့်, ထိုရှင်းလင်းဖို့ကောင်းပါတယ် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များသေချာအောင်သင်တပ်ဆင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်စုစည်းရန်လိုအပ်သည် packages များ / စာကြည့်တိုက် ကြိုတင်မဲလိုအပ်သော။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့အမှု၌, ၏ installation "Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်" ဒါဟာအပေါ်ပြုလိမ့်မည် Respin (လျှပ်တစ်ပြက်) ထုံးစံအမည်ရှိ အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linux အရာအပေါ်အခြေခံသည် MX Linux နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါတည်ဆောက်ထားသည် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်» နှင့်အဘို့အ optimized ဖြစ်ပါတယ် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအကြံပြုချက်များစွာတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည် «သင်၏ GNU / Linux ကို Digital Mining အတွက်သင့်လျော်သော Operating System တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ».
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဖော်ပြထားတယ် - \_ t
"အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ငွေပို့ရန်ခွင့်ပြုထားသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်၊ အုပ်စုတူအဆင့်တူအဆင့်တူသောဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး။ Dogecoin ကို "Internet ပိုက်ဆံ" လို့မှတ်ယူပါ။".
Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ် - MultiDoge နှင့် Dogecoin Core
တခါ Dogecoin တရားဝင် site ကိုအောက်ပါတို့ကိုသာလုပ်ရမည်။
မက်ဆေ့ခ်ျအောက်ရှိ Linux အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ "DOGECOIN ကိုယနေ့စတင်အသုံးပြုခြင်း"
ထို့နောက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်ပါ "Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်" o ထည့်သွင်းအသုံးပြုရန်ပိုက်ဆံအိတ် / ပိုက်ဆံအိတ်။
နောက်, နှင့်၏ဖြစ်ရပ်အတွက် Multidogeတစ်ချိန်ကဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ကွပ်မျက်ခံရ ".Jar ဖိုင်" လက်ရှိ (multidoge-0.1.7-linux.jar) ကိုအသုံးပြု ဂျာဗားသို့မဟုတ် OpenJDKအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ screenshots တွေကအောက်ပါအဆင့်တွေကိုပြသတယ် -
နောက်, နှင့်၏ဖြစ်ရပ်အတွက် Dogecoin Core, တစ်ချိန်ကကူးယူခြင်းနှင့် unzipped ".Tar.gz ဖိုင်" လက်ရှိ (dogecoin-1.14.2-x86_64-linux-gnu.tar.gz) terminal (console) မှတဆင့် run ရန်လိုသည် "Dogecoin-qt ဖိုင်" , လမ်းကြောင်းထဲမှာ:
screenshots များပြသသကဲ့သို့၊ အောက်ပါအဆင့်များ -
Cryptocurrencies နှင့် DeFi အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
ဟုတ်တယ်၊ ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနောက် သငျသညျအနည်းငယ်ပိုလေ့လာသင်ယူချင်တယ် ဒီလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့နည်းပညာနယ်ပယ်အားလုံးမှာအထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အခြားစာပေများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Dogecoin Wallets» အရာရှိများအကြောင်း, အကြောင်းပါ GNU / Linux တွင်မည်သည့်အရာနှင့်မည်သို့ Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ်များထည့်သွင်းထားသနည်း။အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသော Operating Systems များကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ကွဲပြားသောသတ္တုတွင်းကိုသိုလှောင်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည် Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကဲ့သို့ Dogecoin နှင့်အခြားသူများလည်းတစ်ခုလုံးအဘို့, အလွန်ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Dogecoin ပိုက်ဆံအိတ် - တရားဝင် Wallet ကို GNU / Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။